Vaovao - Robots an-trano no lasa tsena robotic lehibe indrindra amin'ny peratra slip
Amin'ny fampiharana robotic, ny peratra slip dia fantatra amin'ny hoe robotic rotary joint na robina slip slip. Izy io dia ampiasaina handefasana ny famantarana sy ny herinaratra avy amin'ny endriny ifotony mankany amin'ny vondrona fanaraha-maso sandry robotic. Manana faritra roa izy: ny ampahany mijanona dia napetraka eo amin'ny sandrin'ny robot, ary ny ampahany mihodina kosa miakatra amin'ny tànan'ilay robot. Miaraka amin'ny rotary robotic joint, ny robot dia afaka mahavita fihodinana 360 tsy misy farany tsy misy olana amin'ny tariby.
Araka ny fanamarihan'ny robot, ny peratra robotic robotic dia mivelatra be. Matetika ny robot feno dia mila peratra slip robot ary ireo peratra slip ireo dia mety amin'ny fepetra takiana samihafa. Hatramin'izao, AOOD dia efa nanolotra fifandraisana isan-karazany amin'ny paikady elektrika mihodina amin'ny rindranasa robotic, anisan'izany ny peratra kapsily kapsily, amin'ny alàlan'ny peratra slip slip, peratra slip cake, fibre rotary optika rotary, sendika rotary elektro-optika ary fivoriamben'ny peratra voafaritra manokana. .
Ny tsenan'ny robotic fangatahana robotic lehibe indrindra dia ny tsenan'ny robots an-trano fa tsy tsena robots indostrialy. Raha ny mahazatra, ny robots indostrialy dia manana takiana avo kokoa amin'ny peratra slip miaraka amin'ny tontolo iainany sy ny asany samihafa. Raha ny tokony ho izy, ny robot an-trano dia manana fepetra takiana amin'ny peratra slip. Ny robot an-trano isan-karazany dia samy manana ny asany ihany koa, toy ny robot manadio banga, robot manasa gorodona, robot manidina amin'ny gorodona, robot manadio dobo ary robot manadio ny tatatra, fa izy rehetra kosa dia mizara endrika kely sy tontolo iainana miasa, ny kapila mifono kapsily AOOD mifandraika amin'izy ireo habe kely, fahaizan'ny famindrana mari-pahaizana ambony ary ny vidiny ambany, dia afaka mamaly ny filan'ny robots any an-trano amin'ny filàna fihodinana 360 degre tsy manam-petra avy amin'ny faritra raikitra mankany amin'ilay ampahany mihodina.